Maitiro ekurodha pasi vhezheni yechinyakare yeCydia package | IPhone nhau
Maitiro ekurodha pasi yekare vhezheni yeCydia package
Imwe yeakanyanya kukosha maficha eiyo vhezheni 1.1.23 yeCydia ndiyo mukana wekutora pasuru yapfuura. Zvichida kuti kana pasuru yaiswa isu tinozozviwana isu nekushamisika kuti haishande sezvayaifanira uye sarudzo yega yataive nayo kusvika zvino yaive yekumisa kana kusunungura iyo tweak. Nesarudzo iyi nyowani, isu tinongofanirwa kurodha pasi yekupedzisira pasuru iyo yakatishandira yeavo achiripo, chimwe chinhu kutaura chokwadi chandingada kuona muApp Store.
Maitiro acho akapusa uye zvirokwazvo vashandisi vane ruzivo rwakawanda vanenge vatowana sarudzo iyi, asi zvirokwazvo kune vatsva vashandisi vasingazive nzira yekuwana iri basa nyowani, iro, nenzira, riri padhuze nedzimwe sarudzo dzaive dzatovepo kwenguva refu. pamberi. Tevere ini ndicha tsanangura iyo (yakapusa) matanho ekutevera kurodha pasi yechinyakare Cydia package.
Tinotsvaga pasuru yacho tinoda kudzikisira.
Kamwe pane tsananguro skrini, tinobaya pane bhatani Shandura.
Takatamba pa Kudonhedza.
Isu tinosarudza vhezheni yaunoda.
Kumusoro kurudyi tinobata Simbisa.
Kunaka kwe iyi sarudzo nyowani ndeyekuti inowanikwa kune ese mapakeji, kwete ivo chete vevanogadzira makuru.
Kana izvi zvikauya zvinobatsira muApp Store, rinova iro chitoro uko Apple inogamuchira kunyorera nekuti inovaona seyakachengeteka uye yakagadzikana, fungidzira kuti yakakosha sei muCydia, uko izvo zvatinoona zvingave zvakadzama sisitimu yekugadzirisa iyo isingashande pakutanga .. Ndingadai ndakafara chaizvo dai sarudzo iyi yaivapo, semuenzaniso, apo Auxo yaive mumavhezheni ayo ekutanga eIOS 6. Mazuva ese ndaive nekuvharwa kwakawanda kwekushandisa, saka ndakaguma ndadimbura tweak. Mukupedzisira ndaifanira kuwedzera iyo A3Tweaks repository kuisa ese maBhaibheri aiyedza kugadzirisa matambudziko. Asi sekutaura kunoita chirevo, hazvina kunonoka kana mufaro wakanaka.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » iPhone » Zvidzidzo uye zvinyorwa » Maitiro ekurodha pasi yekare vhezheni yeCydia package
Hapana chinoonekwa kwandiri, pane chero munhu anoziva nei?
Ami kana ini uye tine yazvino vhezheni yecydia.
Maitiro ekugadzirisa dambudziko re DRM rakawedzerwa zvisirizvo kune iTunes Match nziyo